China Powder Metallurgy Machinery Equipment fekitari uye vagadziri | Welfine
Fe, Cu, FeCu chiwanikwa, stainliee simbi, graphite
Sleeve, Flanged, idenderedzwa, Miniature, Trust Washer, Rod
1) yemukati 3-70mm, zvakare inogona maererano nechikumbiro chako
chiputiriso chemukati: bhegi repurasitiki
yekunze kurongedza: katoni, pallet
Mafuta-akaiswa mushonga mudumbu; Kuzvigadzirira mafuta
Pfeka husingagumi uye hwakareba hupenyu hwebasa
Kukwirira kwekuita kutakura kunogona kuve kwakanyanya mutoro, kudzika kumhanya kudzosera uye kushomeka kunyorera
Yakanaka yekupisa conductivity chivakwa
Inogona kushandiswa mune yakasviba uye inoparadza nharaunda
Ruzha rwakanyanya kushoma pane kumwe kutakura
Inokodzera yakakwira static mutoro
Inogona kushandiswa mune yakawanda tembiricha
Kushivirira kwakazara kwemukati dhayamita G7
Kushivirira kwakazara kwekunze dhayamita S7
Kurudzira shaft shiviriro f7 / g6
Kurudzira dzimba kushivirira H7
Upfu hwesimbi hunotakura hwakagadzirwa nesimbi yeupfu uye imwe antifriction zvinhu hupfu hwakatsindirwa, sintered, plastiki uye yakanyoroveswa. Iyo ine porous chimiro. Mushure mekupinda kwemafuta anopisa, iwo ma pores anozadzwa nemafuta ekuzora. Mukuita kwekushanda, simbi nemafuta zvinopisa uye zvinowedzerwa, uye mafuta anosvinwa kunze kwepore. Iyo yekukwesana pamusoro inogadzirwa. Mushure mokunge kubereka kwatonhorera, mafuta anoyamwa kudzoka mumapora.
Upfu hwesimbi mabheyaringi haugone kumisikidzwa kwenguva refu.
Iyo yepamusoro porosity yehupfu simbi inobereka, iyo yakawanda yekuchengetedza mafuta, asi iyo yakawanda pores, iyo inoderedza simba.
Aya mabheyari anowanzo kuve mune yakasanganiswa lubrication mamiriro, dzimwe nguva anogona kuumba mutete wefirimu lubrication. Ivo anowanzo shandiswa kuwedzera akaoma uye akareruka mutoro uye yakaderera kumhanya mamiriro ekuzora mafuta.
Zvinoenderana nemamiriro ekushanda akasiyana, hupfu hwesimbi mabheyari ane huwandu hwemafuta anosarudzwa. Kana huwandu hwemafuta hwakura, hunogona kushandiswa pasi pekuwedzera mafuta ekuzora uye nemutoro wakaderera. Izvo zvemafuta zvinogona kushandiswa pasi pemutoro unorema uye nekumhanyisa kumhanya. Iyo graphite inobata hupfu simbi inobereka inogona kusimudzira kuchengetedzwa kwekutakura nekuda kwekukora kwe graphite pachayo. Kukanganisa kwayo ndekwekuti simba rakaderera. Pasi pemamiriro ekuti hapana ngura, inogona kufunga nezve kusarudzwa kwemutengo wakaderera uye simba. Iyo simbi yepoda poda simbi ine huni hwepamusoro iri pamusoro, asi inoenderana shaft mutsipa kuomarara kunofanirwa kuve kwakagadziridzwa nenzira kwayo.
Pashure: upfu hwesimbi musimbi Iron uye Bronze Base
Zvadaro: sintering muchina mafuta akaiswa mushonga mudumbu Kubereka
Upfu Metallurgy Machinery
Factory zvibereko upfu simbi Sintered Bush ...